Blog | Happy Sales - POS Supply
POS, IT and Management နှင့် ပတ်သတ်သမျှ
၂၁ ရာစု အတွင်း သတင်းအချက်လက်နည်းပညာများ အထူးလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနှင့်အတူ နည်းပညာအသုံးချမှုများဟာ စီးပွားရေး လျင်မြန်စွာတိုးတက်ကောင်းမွန်မှုအတွက် အထူးအရေးပါ အရာရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ...
ဒီ Crisis ကြီးကို ကျော်ဖြတ်နေရတဲ့ အခုလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ... သင်ဟာ Work from Home လုပ်နေရတဲ့ သူတစ်ယောက်လား? ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေမှာ Online learning လုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်လား? ဒါဆိုရင်တော့ သင်တို့အတွက...
Overcome COVID-19 crisis
လက်ရှိ ကမ္ဘာအနှံအပြားမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုး ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး စီးပွားရေးကျဆင်းမှု ဖြစ်ပေါ်နေတာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ... ဒီ Crisis ကြီး ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ ခ...
POS Hardware foraRetail Business
အရင်တစ်ပတ်က POS Software တစ်ခုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ဘာတွေသိဖို့လိုအပ်လဲ? ဆိုတဲ့ Knowledge Sharing လေးလုပ်ပြီးတဲ့နောက် ဒီကနေ့မှာတော့.... "လက်လီလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အသုံးပြုရန်လိုအပ်မယ့် POS Hardware တွေကဘာတွ...
ChoosingaPOS Software
ဒီကနေ့မှာတော့ POS Software တစ်ခုကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် သိသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ လေ့လာသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်.... Functions ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ software မှာပါဝင်တဲ့ ...
ဒီကနေ့ ဝေမျှပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ IT ပစ္စည်းတွေရဲ့ "Interface" လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်.... ပထမဆုံး "USB" အကြောင်းလေးကနေ စလိုက်ကြရအောင်.... "USB - Universal Serial Bus" ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ...
Electronic Artical Surveillance(EAS) System (or) Anti-Theft System ဆိုတာဟာ အလွယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင် Electornic Device တွေကနေ ထွက်လာတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေမှတစ်ဆင့် မိမိဆိုင်မှ ကုန်ပစ္စည်းများ ခိုးယူခံရမှုတ...
ပထမဦးစွာ Barcode Standardလေးတွေအကြောင်းကို ရှင်းမပြခင်မှာ Barcodeလေးအကြောင်းကို Recap လေးလုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့။ (Barcodeအကြောင်းကို အရင်Postများမှာရှင်းလင်းထားပါတယ်) လူတိုင်းက စားသုံးသူတွေဖြစ်နိုင်သလို လ...
Myanmar Labeling Law
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေကို ၂၀၁၉ ခုနစ် မတ်လ ၁၅ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပြဋ္ဌာန်းပါအချက်များအရ - "စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ဤ...
ဂိုဒေါင်လက်ကျန်ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာ ယနေ့ခေတ် လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အခက်ခဲဆုံး ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဂိုဒေါင်လက်ကျန် မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံ...
အရင်ကဆို ဘောက်ချာစာရွက်ကြီးတွေနဲ့ Customerဝယ်သမျှကို ထိုင်ရေးခဲ့ရတယ်။ Caculator ကြီးတစ်ကိုင်ကိုင်နဲ့ တွက်ရချက်ရ လုပ်ခဲ့ရတယ်။ အချိန်အများကြီးပေးရတယ်။ ဒီလို အချိန်တွေအများကြီး အလဟဿမဖြစ်စေဖို့ သင်တို့ရဲ့...
Barcode Systemတစ်ခုဟာ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာ များစွာမှ အထောက်အကူပြုပေးနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? Barcode Systemတစ်ခုဟာ သင့်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ Point of Sales System, Inventory Management System, Supply Ch...